November 30, 2018 puntlandnews Somaliland, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Xogihii ugu dambeeyey ee ku soo dhacaya warqabadka Puntlandnews ayaa sheegaya in taliska ciidanka Somaliland uu awaamiir ku soo rogey ciidankiisa ku sugan jiidaha dagaalka Tukaraq.
Taliska Somaliland ayaa ku amray saraakiisha ciidanka inay ilaalo gaar ah u sameeyaan darawalada gacanta ku haya gaadiidka dagaalka ciidanka Somaliland isla markaana il gaar ah lagu hayo xilligaan wixii ka dambeeya.
Arrintaan ayaa waxa ay ka dambeysey kadib markii ay soo bateen darawalada gaadiidka dagaalka iyo hubka ula goosanaya Puntland iyo Jabhadda Caarre oo dagaal kala dhexeeyo maamulka Somaliland ee Muuse Biixi hogaanka u hayo.
Dhinaca kalena saraakiisha ciidamada maamulka Somaliland ayaa lagu soo waramaya inay heegan culus geliyeen ciidankooda ayna bilaabeen inay indhaha ku hayaan xilli saraakiisha iyo askartu bilaabeen inay hubka ula goostaan puntland.
Sarkaal katirsanaa ciidamada maamulka Somaliland kana soo jeeda beesha Arab ayaa Puntland gacanta u soo geliyey gaari nooca dagaalka ah, qorigii saarnaa, saanad dagaal iyo qoryaha fudu gaar ahaan AK47 BEEKAA M.